सिन्धुली-सिन्धुलीमा पशु बिमा कार्यक्रम प्रति कृषकहरूको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । पशु बिमा कार्यक्रमबारे जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका कषकहरूलाई जानकारी नहुँदा उनीहरू कार्यक्रमको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् ।
तीनपाटन गाउँपालिका ९ का कृषक अम्बर मगरले विगत ४ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । तर, उनलाई अहिलेसम्म सरकारको पशु बिमा कार्यक्रमबारे थाहा छैन । बेला–बेलामा बाख्रामा रोग लाग्ने र मर्ने गरेपनि न त उनलाई कसैले पशु बिमाका बारेमा भनिदिए न त उनि आफैंले बुझ्नलाई चाँसो राखे । गत वर्ष मात्रै बेच्ने बेला भएका ४ वटा खसि खोरेत रोगका कारण मर्यो । जसबाट उनले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो ।
सोही गाउँपालिकाका अर्का कृषक नरबहादुर लायो मगर र कनपा ६ रातमाटाका मीनबहादुर कार्कीले व्यावसायिक कुखुरापालन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू पनि पशु बिमा कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ छन् ।
उनीहरू त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै कृषकहरूलाई यसबारे जानकारी नै छैन । पशुपालन व्यवसायमा विभिन्न संघसंस्थाले दिएको अनुदानका कारण ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरू पशुपालनमा आकर्षित बन्दै गएको भए पनि पशु बिमा कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय हुदाँसम्म जिल्लाका १ हजार कृषकले मात्र पशु बिमा गराएका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सिन्धुलीका अनुसार हालसम्म १ हजार २३ जना कृषकले ३ करोड २१ लाख ६२ हजार बराबरको पशुको बिमा गराएका छन् ।
पशु बिमा गराउनेमा पनि धेरै जसो सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायीक रूपमा पशुपालन गर्ने कृषकहरू नै बढी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । बजार क्षेत्रका कृषकहरूले भने आफूले पालेको पशुको बिमा गराएका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपाल्ने कृषकहरू अहिलेसम्म पनि बिमाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्, केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकुमार कार्कीले भने, “गाउँ–गाउँमा कुखुरा, बाख्रा र बंगुरपालन गर्ने कृषकहरू धेरै छन् ।”
सिन्धुलीमा गाई फार्म, बाख्रापालन फार्म, बुंगुरपालन फार्म, व्यवसायी कुखुरापालन फार्मको संख्या धेरै भए पनि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फार्मको संख्या १ हजारको हाराहारीमा रहेको डा. कार्कीले बताए ।
पशु बिमाको फाइदाबारे कृषकहरूलाई बुझाउन नसक्दा गत वर्षहरूमा निराशाजनक अवस्थामा रहेको पशु बिमा कार्यक्रम अहिले भने केही मात्रामा भए पनि उत्साजनक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा बढी मात्रामा कृषकहरूले बाख्रा पालेका छन भने गाई र बंगुर पाल्ने कृषकहरूको संख्या पनि पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको केन्द्रले जनाएको छ ।
किसानहरूले आफूले पालेको गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा बंगुरमा कुनै रोग लागेमा अथवा अन्य कारणले मरेमा त्यसबाट किसानहरू नोक्सानमा नपरोस भनेर सरकारले पशु बिमा पोलिसी ल्याएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सिन्धुलीका प्रमुख डक्टर रामकुमार कार्कीले बताए ।
पशुपालक कृषकले विमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियममा पनि सरकारले ७५ प्रतिशत तिर्दिने भएकाले सबै कृषकहरूलाई बिमा गर्न र पशुपालनमा हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न डा. कार्कीले आग्रह गरे ।